Amiir Harry's Apple TV + Taxanaha: "Aniga Ma Arki Kartid" Bandhigyadii May 21 | Waxaan ka socdaa mac
Amiir Harry's Apple TV + Taxanaha: "Aniga Ma Arki Kartid" Premieres May 21
Oprah Winfrey iyo Amiir Harry barnaamijyadooda taxanaha ah ee Apple TV + waxay heleen cinwaanka: "Aniga Ma Arke Kartid" waxaana lagu soo bandhigi doonaa adeegga qulqulka Apple bisha Maajo 21. Waxaa lagu dhawaaqay 2019 iyada oo loo marayo Instagram oo dib loo dhigay sababo la xiriira faafka, waxay ugu dambeyntii u muuqataa inaan dhowaan soo bandhigi doonno horyaalkeedii. Sida aan ku arki karno boodhadhka xayeysiinta, waxay kasoo muuqan doontaa xiddigo ifaya oo ku jira mowduuc aad loogu baahan yahay, gaar ahaan xilliyadan.
Taxanaha taxanaha ah waxaa laqorsheeyay kahor faafida faafida ee ay sameesay Coronavirus sababo laxiriira awgood in dib loo dhigo ilaa tan xigta 21da Maajo. Taariikhda kama dambaysta ah ee filimka dokumenteriga ah halkaas oo amiirka warbaahinta Harry uu yahay soo saare caan ah iyo midas Oprah Winfrey. Arrin marwalba muran badan laakiin aad loogu baahan yahay oo tan iyo markii masiibadu bilaabatay waxaan dhihi karnaa way joogtaa sidii hore. Xiritaanka iyo xiriirka bulshada oo yar ayaa saameyn ku yeeshay dad badan.
Apple wuxuu xaqiijiyay cinwaanka taxanaha Isniinta. "Aniga Ma Arke Karto". Aniga ma arki kartid Cinwaan aad u guuleystay maxaa yeelay runtii maskaxda, shakhsiyadda iyo dareenka qofku waa mid ka mid ah astaamaha gaarka ah ee qofka aadamuhu leeyahay. Awood u leh kan ugu fiican laakiin sidoo kale kuwa ugu xun. Si aad qofka ugu sarraysiiso guusha laakiin sidoo kale inuu ugu jiido cadaabta. Saldhigga dokumentigan wuxuu ku saabsan yahay sida martida loo yahay, Harry iyo Oprah, u abuuraan wadahadallo ku saabsan caafimaadka maskaxda iyo ladnaanta shucuurta, oo ay ku jiraan waxyaabaha u gaarka ah.
Dokumentari wuxuu ka kooban yahay noocyo kala duwan oo ah martida martida sare si looga wada hadlo arrimaha caafimaadka maskaxda, oo ay ku jiraan Lady Gaga, Glenn Close, DeMar Rozan oo ka tirsan San Antonio Spurs, Langston Galloway oo ka tirsan Phoenix Suns, Feeryahankii Olimbikada ee Virginia "Ginny" Fuchs, kuugga Rashad Armstead, iyo u doodaha caafimaadka maskaxda Zak Williams.
Soo-saarka ayaa soo bandhigay wadashaqeynta 14 khabiir iyo ururo la aqoonsan yahay lagana qadariyo aduunka oo dhan. Oo ay ku jiraan Dhakhaatiirta Qalliinka ee California iyo Aasaasaha Xarunta Caafimaadka Dhallinyarada, Dr. Nadine Burke Harris, oo ah aasaasaha Sangath iyo borofisar ka tirsan Global Health oo ka tirsan Harvard Medical School Dr. Vikram Patel, iyo Dr. Bruce Perry, xubin sare oo ka tirsan akadeemiyadda carruurta.
Hadda in ka badan sidii hore, waxaa jira baahi degdeg ah oo loo qabo ku beddel ceebta ku xeeran caafimaadka maskaxda xigmad, naxariis, iyo daacadnimoAyuu yidhi Oprah Winfrey. Taxanaheena ayaa ujeedkoodu yahay inay kiciyaan wada hadalkaas caalamiga ah. "
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Amiir Harry's Apple TV + Taxanaha: "Aniga Ma Arki Kartid" Premieres May 21
Sicir-dhimista 280 euro ee iibsashada 13 "MacBook Pro oo leh processor M1